Taliyihii ciidanka ilaalada ra’siiul wasaaraha Soomaaliya oo geeriyoodey. – Radio Daljir
Taliyihii ciidanka ilaalada ra’siiul wasaaraha Soomaaliya oo geeriyoodey.
Janaayo 29, 2017 9:28 g 0
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa tacsi u direy ehellada iyo qaraabadii uu ka baxay Allaha u naxariistee Taliyihii Ciidanka Ilaalada R.Wasaaraha Gaashaanle Nuur Xasan Xakaar oo maanta u geeriyooday dhaawac ka soo gaarey Qaraxii Argagixiso ee dhawaan ka dhacay Hoteelka Dayax. Wuxuna marxuumka ALLE uga baryay in uu jannadiisa Fardowso ka waraabiyo.
Mudane Cumar ayaa sheegay in marxuumku u dhintay dhaawac ay u gaysteen kooxaha arxanka daran ee Alshahaab, isla markaana wuxuu ku sifeeyey marxuumka in mudadii ay wada shaqeynayeen ku sifoobay howlkar iyo daacadnimo.
“Waxaan Alle uga baryaynaa in marxuumka uu ka waraabiyo naxariistiisa Janno. Waxaa dishay gacan ka xaqdaran, isagoo ku jira howlaha Qaranka, waxaan rajeynayaa kuwa ka danbeeya dhibaatada lagu hayo shacabka Soomaaliyeed in Caddaalad la horkeeni doono”.ayuu yiri R.Wasaare Cumar.
DHEGEYSO-Gudoomiyaha gudiga abaaraha Puntland oo ka hadlay xagga wax marayaan.